बेलायतमा प्रियंकाको 'क्रेज' - HimalayaMail.com
Home » मुख्य समाचार » बेलायतमा प्रियंकाको ‘क्रेज’
बेलायतमा प्रियंकाको ‘क्रेज’
लन्डन । नायिका प्रियंका कार्कीलाई बेलायत अहिले पानी पधेंरो जस्तै भएको छ । आइतबार अल्डरसटमा भएको ‘हयाप्पी डेज’ को रेड कार्पेट प्रिमियर शोका लागि यसपटक दुई दिनका लागिमात्र बेलायत आएकी प्रियंका सोमबार नेपाल फर्किसकेकी छन् । तर, उनी फेरि छिट्टै यूके आउंदैछिन् नयां चलचित्र छायांकनका लागि । ‘लिली बिली’ चलचित्रमा उनको समेत भूमिका भएपछि प्रियंका आफ्ना केही काम सकेर फेरि बेलायत आउने हयाप्पी डेजका निर्देशक मिलन चाम्सले बताए । चाम्सले नै निर्देशन गर्ने ‘लिली बिली’ छायांकनका लागि धिरेन शाक्य, प्रदीप खड्का लगायत कलाकारहरुको टोली स्कटल्याण्ड पुगिसकेको छ । ‘हयाप्पी डेज’ को छायांकनका क्रममा पनि प्रियंकासहितको टिम झण्डै डेढ महिना बेलायत बसेको थियो ।
आइतबार अल्डरसटस्थित प्रिन्सेस हलमा आयोजित ‘हयाप्पी डेज’ को रेड कार्पेट प्रिमियर शोमा प्रियंका दर्शकमाझ घेरिइन् । उनीसंग सेल्फी लिन तंछाडमंछाड गर्दै थिए दर्शक ।
बेलायतका नेपाली व्यवसायीले निर्माण गरेको चलचित्र ‘हयाप्पी डेज’ को रेड कार्पेट शो भव्य रुपमा सम्पन्न भयो । शो शुरु हुनु अघि कलाकारहरु प्रियंका कार्की, धिरेन शाक्य, प्रदीप खड्का, दीया पुन लिमोजिनबाट उत्रंदा दर्शकहरुले तालीले न्यानो स्वागत गरेका थिए । उक्त अवसरमा पाइपर धुन बजाइएको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले नेपाली चलचित्र र कलाकारहरुलाई माया र सम्मान गर्न अनुरोध गरे ।प्रिमियर शोमा एनआरएनए केन्द्रिय उपाध्यक्ष कुल आचार्य र उक्त फिल्मका निर्देशक मिलन चाम्सले पनि मन्तव्य दिएका थिए ।
वी पी खनाल, हिरल जोशी, भवानी शर्मा, मिलन चाम्स र डा. अशोक बन्सालले निर्माण गरेको ‘हयाप्पी डेज’ ले आम नेपालीको बेलायत टेक्ने सपना, रातो पासपोर्टको महत्वकांक्षा, आप्रवासीले भोग्नुपर्ने अप्ठेरो जस्ता सामाजिक विषयवस्तुलाई उजागर गरेको छ ।
उक्त फिल्ममा स्कटल्याण्ड, वेल्स र इंग्ल्याण्डका रमणीय दृश्यहरु समेटिएको छ । नेपालबाट आएका कलाकार र प्राविधिकहरु करिब डेढ महिना बेलायतमै बसेर ९५ प्रतिशत छायांकन यहीं गरिएकाले चलचित्रको लगानी अढाइ करोड रुपैयां पुगेको निर्माण पक्षले बताएका छन् । फिल्ममा प्रियंका, दयाहाङ राई, सन्जय गुप्ता, विक्की जोशी, मोनिका गुरुङ आदि कलाकारको मुख्य भूमिका छ ।
Previous Post ‘बुद्धको सन्देश जीवनमा लागू गर्न अपरिहार्य’
Next Post एसीसी यू–१९ एसिया कप ः नेपालद्वारा मलेसिया आठ विकेटले पराजित